Linux nehupenyu hwemuti weKisimusi mune yako terminal | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe vamwe vedu tatova nezvenyaya iyi kwemazuva kana kunyangwe mavhiki, Kisimusi haitangi munyika dzakaita seSpain kusvika mangwana 22, zvichinyatsoenderana neRisimusi. Saka nhasi 21 ndiyo nguva yakanaka yekuti sevha ikorokotedze munhu wese paKisimusi, kusanganisira avo vanotiverenga kubva paWindows;) Tinoda Kisimusi zvakanyanya kana zvishoma, chii chiri Krisimasi kupfuura kushongedza? Zvakanaka, muchinyorwa chino tichaenda kukudzidzisa maitiro ekuisa imwe, kunyanya a animated krisimasi muti (zvakasiyana ne izvi) mune yako terminal.
Zvaticha tsanangura pano inzira mbiri dzekuzviita, uye izvi ichashanda pane chero Linux based based system. Yokutanga ndiyo yakapusa uye yepamutemo, asi zvinyorwa zvacho zvichave muChirungu uye kwete zvemunhu. Mune wechipiri ini ndicha tsanangura maitirwo ezvinhu kuti zviwedzere kuve zvemunhu, asi zvinogona kuve zvakati omei. Chero zvazvingaitika, iwe uchaona unofamba muti weKisimusi, shabby, asi chaizvo linux.
1 Maitiro ekudhawunirodha christmas tree script
2 Maitiro ekugadzirisa iwo mavara
Maitiro ekudhawunirodha christmas tree script
Nzira yepamutemo yekutora muti weKisimusi ndeyekutevera matanho aya:
Isu tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera:
Tevere, tinoita kuti iyo faira ishandiswe neuyu mumwe murairo:
Uye pakupedzisira, tinozviita nemumwe uyu murairo:
Uye zvingave zvirizvo ... kana uchizvida muChirungu.
Maitiro ekugadzirisa iwo mavara
Kana iwe uchida icho muchiSpanish kana nemamwe mameseji, ini ndinokurudzira iwe uteedzere mamwe matanho:
Isu tinoteedzera iyo URL yeiyo script, tinoiisa mubhokisi re URL rebrowser uye isu tinopa iyo kuti ipinde, kana isu tinobaya zvakananga pano.
Ichavhura peji ine yakawanda zvinyorwa. Isu tinosarudza zvese uye tinoteedzera.
Isu tinogadzira faira remavara, kana isu tinovhura chinyorwa chemavara uye tinamate kodhi yacho mairi.
Tevere, tinowana panoti "MERRY CHRISTMAS" uye isu tinoti "Merry Christmas."
Pazasi peiyo mutsara, "$ new_year" ndeye nhamba yegore rinouya, iro gore rino "2021," saka tinoisiya.
Pazasi isu tinotsvaga "CODE" zvinova izvo zvinozoonekwa nemavara akasiyana, uye ipapo tinowedzera imwe chinyorwa.
Kuti ibude sezvatinoda, zvinoenderana nezvakanyorwa, tinofanirwa kuchinja kukosha "(C - 10)" mumutsara umo unoti "Uye yakawanda CODE mu $ new_year". Kuti ibude sezvamunazvo mukubata musoro, ndaifanira kuisa «11».
Isu tinochengeta iyo faira seKisimusi.sh.
Tinoita kuti zviitwe, izvo zvinogona kuitwa senge iri yepamutemo nzira kana nekudzvanya kurudyi uye kuitendera kuti ifambe sepurogiramu.
Chekupedzisira, tinozviita, izvo zvinogona zvakare kuitwa senge iri yepamutemo nzira kana nekungodhonza iyo faira kune terminal uye kudzvanya kupinda.
Uye ndizvo chete. Icho hachisi chikumbiro chinoponesa hupenyu hwedu, asi ndicho icho chinotibatsira kuti tikushuvire Kisimusi yakanaka, uye tazviita saizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa linuxero uye wakasvinudzwa muti weKisimusi mune iyo terminal yeako anoshanda system
Kwaziso kubva kuChicago. Ndanga ndichivatevera kwenguva yakati rebei uye ndinogutsikana nezviri mukati. Ivo vane rakaringana-to-date ruzivo. Imwe pfungwa yandinoda kuti iwe utarise ndeyekuva nechikamu chakakosha pamusoro wenyaya yekutamba kwemimhanzi paLinux.
Ini handisi kungotaura nezve vatambi vakasiyana, ndiri kutaura nezve chimwe chinhu chakasarudzika senge "yakakwana bit" yeiyo-fi mimhanzi yekutamba. Ndatenda zvikuru nekuterera kwako uye uve neKisimusi yakanaka.
Ndiani asingade kuva nemuti mune anofarirwa ASCII mavara? .. XD
"Haisi kunyorera kunoponesa hupenyu hwedu, asi ndiko kunotibatsira kukushuvira Kisimusi yakanaka, uye tadaro";)
"1. Isu tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera: »
Zvingave zvakafanira kuisa «wget«. Kana iwe ukaisa iyo url yakanangana mune iyo terminal iyo inokupa iwe kukanganisa.
"piri. Tevere, tinoita kuti iyo faira ishandiswe neuyu mumwe murairo:
* Inofanira kunge iri:
chmod + x muti-EN.sh
Danilo Quispe Lucana akadaro
Kune zvakare vhezheni yatove muSpanish (nemunyori mumwe chete):
Pindura Danilo Quispe Lucana